ARSENAL: Toban Ciyaartoy Oo Ka Tegaya Emirates Dhamaadka Xili Ciyaareedka Iyo Xogta Laga Helay Xiddigo Ay Ku Jiraan Ozil & Mkhitaryan Oo Meelo Kale Raadsanaya – Latest Sports News
ARSENAL: Toban Ciyaartoy Oo Ka Tegaya Emirates Dhamaadka Xili Ciyaareedka Iyo Xogta Laga Helay Xiddigo Ay Ku Jiraan Ozil & Mkhitaryan Oo Meelo Kale Raadsanaya
Toban ka mid ah ciyaaryahannada Arsenal ayay suurtogal tahay inay iskaga dhaqaaqaan kooxdooda marka uu furmo suuqa iibka kala iibisga ee xagaaga, kuwaas oo fursad u siin karaya Unai Emery inuu ka helo dhaqaale aan buurnayn oo uu ku xoojisto miisaaniyadda uu u qorsheeyey inuu ciyaaaryahanno cusub ku soo iibsado.
Arsenal ayaan caan ku ahayn inay lacag badan u kharash garayso si la mid ah kooxaha kale ee waaweyn ee Ingiriiska, laakiin way ku adkaan doontaa inay lasii loollanto haddii aanay tallaabadooda oo kale qaadin, sababtaas darteedna waxay u baahan tahay inay si fiican isku xoojiso ka hor bilowga xili ciyaareedka dambe.
Ka hor inta aanay suuqa gelin, Gunners waxay bannayn doontaa lambarada ay xidhan doonaan saxeexyada cusub, waxaana haddaba la ogyahay in Aaron Ramsey iyo Petr Cech ay ka dhaqaaqi doonaan Emirates marka uu dhamaado heshiiskoodu dhamaadka xili ciyaareedka.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, Dany Welbeck ayaa isaguna si xor ah uga tegi doona Arsenal marka uu furmo suuqu, waxaanu raadsan doonaa koox kale oo uu ka heli doono waqti ciyaareed.
Wargeysku waxa kale oo uu sheegay in Arsenal ay doonayso inay iibiso oo ay safkeeda ka saarto toddoba ciyaartoy oo kale oo ay u aragto in aanay hannaankeeda dagaalka sannadaha soo socda ku habboonayn, waxaanay kala yihiin, Mesut Ozil, Henrikh Mkhitaryan, Shkodran Mustafi, Mohamed Elneny, Carl Jenkinson, Calum Chambers iyo David Ospina.
In kasta oo taageereyaasha Arsenal aanay ku farxi doonin inay arkaan Ozil oo ka tegayao Emirates Stadium, haddana laacibka reer Germany ayaa ku dhibaatooday kooxda tan iyo markii uu tegay Arsene Wenger, waxaana boos joogto ah u diiday Unai Emery oo inta badan xili ciyaareedka kaydka ku hayey, taas oo xattaa uu ugu daray inuu dhalliilo qaab ciyaareedkiisa.
Mail waxa uu tibaaxay in Arsenal ay hore u go’aansatay inay iska dirto Mustafi ka hor intii aanu khaladaadkii waaweynaa samaynin kulamadii ugu dambeeyey.